Dare reParamende Rotanga Kunzwa Pfungwa dzeVanhu Panyaya yeBhajeti reGore Rinouya
Dare reNational Assembly neMuvhuro rakatanga kunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro pehurongwa hwemashandisirwo emari egore rinouya kana kuti bhajeti.
Vagari vemuHarare vapinda mumusangano webhajeti ra2022 vakurudzira kuti mari yakawanda yehurumende ipiwe kumapazi anoti rezvehutano, dzidzo, remagariro evnahu uye vechidiki nezvemitambo.
Vachipa pfungwa dzavo nezvebhajeti ra2022 mumwe wevechidiki VaYoungerson Matete vati vanoda kuti bazi rezvehutano riwane zvikamu gumi nezvishanu zvebhajeti regore rinouya sezvinotarwa nechibvumirano cheaAbuja Declatration.
VaMatete vatiwo hurumende inofanira kushandisa mari yainenge ichiti yasara iri muhomwe kana kuti bhajeti surplus kubatsira varombo.
Amai Mercy Nyadome vakurudzira kuti paiswe mari parutivi yekugadzira mutemo wekuti vanochera zvicherwa vabhadhariswe mutero.
VaTanaka Mutangendebvu vatiwo vanoda kuti chikamu chebhajeti chakakura chiende kune vechidiki sezvo vari ivi vakawandisa munyika.
Mumwezve mugari wemuHarare Amai Charity Mandishona vatiwo pamusoro pehutano, nyaya yemvura irikushungurudza kunyanya madzimai mazhinji nekudaro vati vanoda kuti kuve nemari inoiswa yekucheresa zvibhorani.
Vanoongorora nyaya dzezvehupfumi uye vachirarama nehurema, VaMasimba Kuchera vatiwo vanoda kuti mubhajeti ra2022 muiswe mari parutivi kubatsira vanorarama nehurema nekudzidzisa vashandi mumapazi ehurumende mutauro wesign language.
Muzvare Sharon Chigwedere Tendayi vatiwo havatarisire kuti bhajeti ra2022 ripinze nyika muzvikwereti vachitiwo nyaya yehuori inofanira kugadziriswa.
Vamwewo vataura pamusangano uyu vatiwo vanoda kuti vana vekumauniversity vapiwewo mari yezvikwereti, kudzidzo kuiswe mari inozoita kuti varairidzi vabhadharwe mari dzinovakwanira.
Vanga vachitungamirira komiti yebhajeti yanga ichinzwa pfungwa dzevanhu muHarare VaEdmond Mukaratigwa vakurudzirawo kuti vasina kukwanisa kupa pfungwa dzavo pamusangano wanhasi vaite zvekunyorera kudare reNational Assembly. Vatyiwo vanokoshesa pfungwa dzeveruzhinji vakati vanhu vape pfungwa dzavo vakasununguka pasina kutya.
Makomiti ebhajeti awa achange ichitenderera kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika kusvika musi wa15 Gumiguru.